अमेरिकाबाट आएर बिहे गर्दा सु हाग रा तको दिन बुहारीमा जब छोराले यस्तो खोट देखे त्यसपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 30, 2021 AdminLeaveaComment on अमेरिकाबाट आएर बिहे गर्दा सु हाग रा तको दिन बुहारीमा जब छोराले यस्तो खोट देखे त्यसपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
काठमाडौ । दुई आमाका दुई भाई छोरा थिए । यो घटना चितवनको हो । चितवनका दुई आमाहरु आफ्ना जवान छोराहरु हराएको भन्दै मिडियामा आए । उनीहरुले आफ्ना समस्या मिडिया सामु राखेका छन् । चितवन मंगलपुरकी एक आमा आफ्ना १७ वर्षका छोरा हराएको भन्दै खोजीका लागि सहयोग माग्न पुगेकी थिइन् भने अर्की नारायणगढकी आमा पनि आफ्नो कान्छो छोराको खोजीमा सहयोग माग्दै पुगेकी थिइन् ।
दुवैका दुई, दुई वटा छोरा हुन् । तर कान्छा छोराहरु हराउँदा ति आमाहरुको आँखा ओभाएको छैन । नारायणगढ वाह्रघरेकी गिरीजा लम्सालका छोरा ३३ वर्षका थिए हराएको बेलामा । उनी हराएको ५ वर्ष पुरा भइसकेको छ । गोमा गिरीका छोरा दिनेश गिरी ७५ साल असारमा हराएका हुन् । दिनेश पढ्न मन गर्दैनथे । तर आमालाई आफ्ना छोरा निकै राम्रो पढ्ने गरेको बताउँछिन् ।
छोरालाई पढाउनकै लागि आफुले निकै मेहनत गरेको भएपनि छोराले पढ्न मन भने गर्दैनथे । छोराले ११ पास गरेपछि १२ मा भर्ना गर्न क्याम्पसले ४० हजार रुपैया मागेको थियो । तर उनी मेरो टाउको दुख्छ मन लाग्दैन पढ्न भन्थे । आमालाई आर्थिक रुपमा सहयोग होला भनेर उनी साहुको पसलमा काम गर्न पनि थालेका थिए ।
हराएका दिन उनी क्याम्पस गएनन् । साहु काठमाडौ गएका छन्, मलाई पसल हेर्न लगाएका छन् भने पनि उनी पसल पनि गएनन् । दिउसो ३ वजे लुगा लगाएर वाहिर निस्केका छोरा अहिले सम्म फर्केर आएका छैनन् । त्यस्तै नारायणगढका कथा भने फरक छ । उनी अमेरिकामा पढ्थे । पढाइ सकेर उनी नेपाल फर्किए ।
वुवाआमालाई अब विवाह गर्छु भने । सल्लाहमा विवाह पनि गरिदिए । भोलीपल्ट जव दुलही फर्काएर ससुरालीवाट घर आए उनले अनौठो कुरा सुनाए । आमा मलाई त झुटो बोलीएको रहेछ । केटीलाई त ट्युमर रहेछ भनेर सुनाए । माइतीलाई सोध्दा त्यो ट्युमर नभएर मुसा हो भनेर जवाफ दिए ।त्यही कुरावाट छोराको मन विग्रिएको थियो, आमा भन्छिन्, त्यसपछि छोरा काठमाडौ गएर क्याम्पस पढाउन थाल्यो ।
२०७० साल भदौ ४ गतेवाट उनी हराएका हुन् । कहिले काही घर आउने र काठमाडौ क्याम्पस पढाउन थालेका छोरा अचानक काठमाडौवाटै हराए । अहिले उनी क्याम्पसमा पनि सम्पर्कमा छैनन् । उनको श्रीमतीले अंशदावी गरेर सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकी छन् । उनको श्रीमती पनि अहिले दुई वर्ष देखि उनको श्रीमती सीता पनि अहिले कता गइन् थाहा छैन ।
आमा भन्छिन्, छोरा अब सीतावाट कुनै समस्या छैन । उनले सम्बन्ध विच्छेद गरेर गैसकिन् । दुई वर्ष मु द्दा चलेर अंश लिएर गइसकेकाले अब फर्केर आउ । सीतावाट कुनै रोकथाम छैन विनोद तिमी जहाँ बसेको भएपनि फर्केर घर आउ, आमा भन्छिन्, घर आउन मन नभएपनि सम्पर्कमा आउ । थप हेर्नुहोस् भिडियोमाः